Musharaxiinta Mucaaradka oo ku hanjabay inay Banaanbaxyo dhigi doonaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul u Cambaareeyay Weerarkii dowladda Federaalka ee muddo xileedkoodu dhammaaday ku qaaday xubno ka tirsan Musharaxiinta, kuna hor istaagtay banaanbax nabadeed oo ka dhici lahaa Muqdisho.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayey Musharaxiinta ku eedeeyeen falalkii ka dhacay Caasimadda, iyagoona sheegay in dembi fool xun tahay in Farmaajo isticmaalo Ciidan isaga ka amar qaata, kuna tilmaamay inuu yahay dambiile Qaran.
Musharaxiinta oo Bayaan ku qurnaa Luuqad adeg soo saaray ayaa sheegay inay u cadaatay in Farmaajo uusan nabad iyo xasilooni ka rabin dalka, damacna ka aheyn inuu galo doorasho heshiis lagu wada yahay.
Midowga Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ayaa si cad u sheegay inay joogteyn doonaan bannaanbaxyada, si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda iyo in dalka aysan ka abuurmin diktaatooroyad.
Si kastaba dowladda Federaalka ayaa is hor istaag ku sameeysay banaanbax ballaaran oo ay qorsheenayeen in Musharaxiinta Madaxweynaha ku qabtaan taalada daljirka daahsoon ee degmada Boondheere, hayeeshee dowladda ayaa xirtay shalay waddooyinka Caasimadda intooda badan.